अध्यक्षमा हारेका भीम रावलको अबको भूमिका के होला? - ramechhapkhabar.com
अध्यक्षमा हारेका भीम रावलको अबको भूमिका के होला?
नेकपा (एमाले) का नेता भीम रावल अध्यक्ष पदको निर्वाचनमा केपी ओलीसँग पराजित भएका छन्। उनी ओलीसँग पराजित भए पनि केन्द्रीय सदस्यमा भने विजयी भएका थिए। तर, त्यसलाई रावलले अस्वीकार गरेका छन्। एमालेको निर्वाचन आयोगका प्रमुख डा. विजय सुब्बाले रावलले केन्द्रीय सदस्य पद पनि अस्वीकार गरेको बताए।
निर्वाचनको मत परिणामको औपचारिक घोषणापछि छोटो प्रतिक्रिया दिएका रावलले आफू अध्यक्ष पदको उम्मेद्वार भएकाले सदस्य अस्वीकार गरेको बताए। उनले ओलीसँगको प्रतिस्पर्धामा २२३ मात्रै मत पाएका छन्।
ओलीको मत एक हजार ८३७ थियो। रावलले आफूले पाएको मतले आफ्नो एजेण्डा स्थापित भएको बताए। उनले जबजको अभ्यास हुनुले आफ्नो एजेण्डा स्थापित भएको प्रतिक्रिया दिए। पार्टीमा कसरी काम गर्ने भन्नेबारेमा भने अहिले नै केही नसोचेको उनको भनाइ थियो।
रावलले कुनै पनि कमिटीमा नरहने बताए। ‘अहिले मैले तपाईंसँग भन्न हतार हुन्छ। काठमाडौं गएपछि कमिटीमा नरहेर कसरी काम गर्ने भन्नेबारेमा जानकारी दिने बताए,’ उनले भने।
नेकपा (एमाले)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको महाधिवेशनमा पाँच लाख बढी जनसहभागिता रहेको बताएका छन् । अध्यक्ष ओलीले मंगलबार पार्टीको १०औं महाधिवेशन अन्तर्गत मंगलबार बन्दसत्रलाई समापन गर्ने क्रममा बोल्दै महाधिवेशनमा पाँच लाख बढी जनसहभागिता रहेको दाबी गरेका हुन् ।
अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्, ‘महाधिवेशनमा पाँच लाखको सहभागिता हुने भनेका थियौं । ५ लाख भन्दा बढी नै संख्या पुग्ने गरी, बाटाहरुले नथाम्ने, गाली ठाउँले नथाप्ने र यातायातले नछान्नेगरी जनसहभागिता भयो ।’
त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले अनुशासन आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई विशेष निर्देशन दिँदै अब पार्टीमा अनुशासन उल्लंघन सैह्य नहुने बताए ।
उनले भनेका छन्, ‘पार्टीभित्र अनुशासनको स्थिति के छ ? अनुशासन उल्लंघन भएमा तिनलाई हटाउन के कस्ता उपाय अपनाउने, अनुशासन उल्लंघन हुन लाग्दा पनि सचेत गराउने काम दृढताका साथ गर्नुपर्छ ।’ त्यस्तै उनले अनुशासन बिनाको पार्टी बजार मात्र हुने दाबी गरे । उनले अब तीन महिनासम्म एकीकरणको अभियान सञ्चालन गर्ने पनि जानकारी दिए ।